कोरोना उपचारमा नेपाल सफल हुँदै | Investopaper
इन्भेष्टोपेपर । जेष्ठ १७, २०७८
लन्डन  । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)को दोस्रो लहरसँग जुधिरहेको नेपालको अवस्थालाई यहाँ रहेका नेपाली चिकित्सकले गहन रूपले हेरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सङ्क्रमणसँगै निको हुने दर पनि बढ्दै जानु सन्तोषको कुरा भएको भन्दै उनीहरूले रोग लाग्नै नदिन र निको हुने दरलाई थप बढाउन अझ उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को डार्टफोर्डस्थित डारेन्ट भ्याली अस्पतालमा १५ वर्षदेखि श्वासप्रश्वास विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डा. सुधिर लोहनी नेपाली चिकित्सकहरूको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिलो त जहाँसुकै पनि सङ्क्रमण हुनै नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । सङ्क्रमित भइहालियो भने डराउनु भएन । हल्का लक्षण देखिएकाहरू अस्पताल जानै पर्दैन । सन्तुलित आहार, प्रशस्त झोलिलो कुरा र शरीरलाई चलायमान राख्न सकियो भने कोरोना निश्चित अवधिपछि आफैँ हराएर जान्छ । सन्चो छैन भनेर सुतेर बस्यो भने झन् गलाउँछ । त्यसैले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी अभ्याससँगै कोठाभित्रै, भ-याङ वा बगैँचामा हिँड्डुल र कसरत अनिवार्य गर्नुपर्छ  ।”
उहाँका अनुसार शरीर चलायमान नहुँदा शरीर कमजोर भएर जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ । सक्रिय नहुँदा निमोनिया हुने, रगत जम्नेजस्ता समस्या हुन सक्छन् । सामान्य लक्षण भएकाले खासै औषधि लिनुपर्दैन तर खोकी छ भने मह उपयोगी हुन सक्छ ।
बेलायतमा यस्ता सेन्टरमार्फत बिरामीले सेवा लिइरहेको भन्दै डा. लोहनी थप्नुहुन्छ, “नेपालमा विभिन्न स्थानमा यस्ता सेन्टर बनाउनु आवश्यक छ । यससँगै रोग लागिसकेपछि र दीर्घ फिजियोथेरापीलाई बिरामीको अवस्था हेरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य जटिलतालाई ठीक गर्ने छ । भाइरसको प्रवृत्ति नै फैलिने भएकाले भीडभाड हुने स्थलबाट यो चाँडो फैलिन्छ ।
नेपाललगायत भारतका बजार बढी नै भीड हुने र मेला, विवाह, भोजलगायत हुने भएकाले पनि यहाँ सङ्क्रमण बढी हुन सघाउ पुग्यो । विशेष गरेर कमजोर, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगीलाई बढी असर गरे पनि पछिल्लो समयको नयाँ भाइरसले युवालाई बढी असर गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा कोरोना उपचारमा सुधार देखिन थालेको छ र सफलता प्राप्त गर्दै छ । बिरामी अस्पताल जान पाएको अवस्था छ । नयाँ रोग भएकाले सुरुमा केही अलमल भए पनि नेपालले उपचारमा राम्रो गर्दै छ । यद्यपि नेपालमा औषधिको प्रोटोकल बनाए एकरूपता भने ल्याउन जरुरी छ ।
अध्ययन अनुसन्धान गरेर पनि औषधिको प्रयोग आवश्यक भएको भन्दै उहाँ थप्नुहुन्छ, “वास्तवमा यो औषधिको अध्ययन गर्ने अवसर पनि हो, जुन पछिलाई प्रभावकारी हुन्छ । यसबाहेक सरकारले सबै तह र तप्कालाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ भन्ने प्रत्याभूतिको पनि वातावरण बनाउनुपर्छ ।” याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरिएकाे छ ।
← प्रधानमन्त्री जोन्सनको विवाह, विवाहमा एक वर्षिय छोरा पनि सहभागी
सुनचाँदीको मूल्य बढनेक्रम जारी, आजकाे भाउ कति ? →